भजनसंग्रह 60 ERV-NE - प्रमुख - Bible Gateway
भजनसंग्रह 59भजनसंग्रह 61
भजनसंग्रह 60 Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)
प्रमुख संगीतकारलाई: “करारको लिली” को रागमा दाऊदको “मिक्तम”[a] भन्ने भजन। यो त्यस बेलाको भजन हो जब दाऊद अराम नेहेर्याम र अराम जोबहसँग लडे अनि योआबले 12,000 सिपाहीहरूलाई नूनको उपत्यकामा परास्तगरि फर्केर आए।
1 हे परमेश्वर, तपाईं हामीसित क्रोधित हुनुहुन्थ्यो।
तपाईंले हामीलाई त्याग्नु भयो र ध्वंश पार्नु भयो।
दया गरेर हामीलाई पुनः त्यस्तै राम्रो बनाई दिनोस्।
2 तपाईंले यस पृथ्वीलाई थर्काउनुभएको छ।
तपाईंले त्यसलाई फटाउनुभएको छ।
दया गरी यसलाई जोड्नु होस्।
3 तपाईंले आफ्नो मानिसहरूलाई धेरै दुःख-कष्टहरू दिनुभएको छ।
हामी धर्मरिन्दै लड्दै हिंड्ने रक्स्याहा (जँड्‌याहा) मानिसहरू हौं।
4 जसले तपाईंको उपासना गर्छन् उसैलाई चेताउनी दिनुभयो।
अब तिनीहरू आफैंले आफ्ना शत्रुहरूबाट बचाउँन सक्छन्।
5 तपाईंको महान् शक्ति चलाएर हामीलाई बचाउनु होस्।
मेरो प्रार्थनाको जवाफ दिनुहोस् अनि तपाईंले माया गर्ने मानिसहलाई बचाउँनु होस्!
6 परमेश्वर आफ्नो मन्दिरमा बोल्नु भयो,
“यसकारण म धेरै नै खुशी छु।
म यो भूमि आफ्ना मानिसहरू माझ बाँड्दछु।
म तिनीहरूलाई शेकेम दिनेछु,
म तिमीहरूलाई सुक्कोत उपत्यका दिनेछु।
7 गिलाद र मनश्शे मेरो हुनेछ,
एप्रैम मेरो शिरस्त्राण[b] हुनेछ
यहूदा मेरो राजदण्ड[c] हुनेछ।
8 मोआब मेरो खुट्टा धुने बाटा हुनेछ।
एदोम मेरो जुत्ताहरू बोक्ने दास हुनेछ
म पलिस्तीका मानिसहरूलाई परास्त गर्ने छु अनि विजयको स्वर कराउनेछु।”
9-10 तर परमेश्वर, तपाईंले हामीलाई त्याग्नु भयो!
तपाईं हाम्रो सेनासँग जानु भएन।
यसैले यस्तो बलियो र सुरक्षित शहरमा कसले मेरो अगुवाई गर्ला?
कसले मलाई एदोमसँग लडाइँ गर्नलाई बाटो देखाउला?
11 हे परमेश्वर, हाम्रा शत्रुलाई हराउन हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्।
पृथ्वीका मानिसहरूले हामीहरूलाई सहयोग गर्न सक्तैनन्।
12 परमेश्वरले मात्र हामीलाई बलियो बनाउन सक्नु हुन्छ।
अनि परमेश्वरले मात्र हाम्रो शत्रुहरूलाई हराउन सक्नु हुन्छ।
भजनसंग्रह 60 मिक्तम यसको पक्का अर्थ थाहा छैन, तर यसको अर्थ “सुसज्जित गीत” हुन सक्छ। यो गीत, दाऊदले लेखेको अथवा उहाँमा समर्पण गरिएको थियो।
60:7 शिरस्त्राण शिर सुरक्षा गर्ने धातूको बलियो टोपी।
60:7 राजदण्ड खास किसिमको लट्ठी, राजा अनि अगुवाहरूले बोलेर आफूलाई शासक हुँ भनेर दर्शाउँने चिन्ह।